China Canton Fair 2020 Autumn, China Import uye Export Fair fekitori nevatengesi | Huaihai Holding Boka
Chimiro: Gadzira yakasanganiswa yakakomberedzwa boriti mamiriro kuti ishandure shanduko yepombi zvinhu kuburikidza nepombi inokomborera kuita, kuderedza mapundu pakati pekutambanudzira uye weld pakati pemapaipi, dzivirira kusagadzikana kunetseka, kukwirira uye kusimba kwemaindasitiri kune weld panguva yekushambadzira;
Ngatizivisei kubva kumberi chikamu. Iye zvino tinogona kuona dengu repamberi, iyo yesimbi bar kunyange yakaenzana neyakaenzana, chimiro chakasimba kwazvo. Unogona kuisa bhegi rako kana ngowani mariri, zviri nyore kwazvo. Inotevera ndiyo forogo yekumberi, isu tine maviri pamusoro mana emakambani anotengesa kune ayo, iyo dhayamita ndeye φ27mm, iri hydraulic, tinoisa hydraulic mafuta mukati mayo, inova inopa yakanaka kutyisa kunyatsoita mashandiro, ita kuti utyaire zvakanaka kunyange pamigwagwa yakaipa. Zvakare iwe unogona kuona appreace, yakatsiga uye yakajeka, kuratidza yedu yakakwirira mhando standard kune zvikamu. Uku ndiko kupenya kwemusoro uye kutendeuka, ivo vese vanazvoEEC chitupa. Saizi yekuisa inoenderana nezvinodiwa zveEEC. Pano pane tafura yemidziyo, tinogona kuwana mabasa mazhinji etiraki iyi. Kutanga iine magetsi maviri, heino bhatani kusarudza Forward giya kana Reverse giya. Uye Forward giya, kune matatu emhando yekumhanya kwakasiyana kugadzirisa, heino bhatani rakasarudzwa Yakakwira, yepakati kana Yepasi kumhanya. Uye kana tikashandisa reverse gear, pachave ne alarm yekunyevera vanofamba shure kwako. Isu tinokwanisa kuona yeruzivo mumhanyisa mu metres yeLED, zvakare inoratidza ruzivo rwebhatiri, ruzivo rwekujeka, Yekumhanya izvozvi uye neruzivo rwakazara. Rega ndikuratidze.
Zvino isu tinowanzoenda kuchigaro, sekutaura ini ndambotaura, iyo cushion uye backrest inonyanya ergonomic, Yakaomeswa backrest uye chigaro cushion chine hutyairi hwekutyaira. Iyo driver driver cushion ine off-seat alarm alarm, inogona kuyeuchidza vanhu kudzima magetsi kana waburuka mumotokari, kuve nechokwadi chekutyaira kwemutyairi uye nevamwe. Pasi pechigaro pane bhatiri, uye bhatiri iri 60V uye 32 AH ichipa rakareba re50km. Ngatione armrest, isu tinoshandisa imwe yakabatanidzwa yekukotama kusimbisa chubhu, iyo yakasimba kwazvo uye yakasimba. Iwe unogona kuona isu tichigadzira chikamu chimwe nechimwe nekufunga nezvehupenyu hwevanhu.Online Canton Fair
Ngatisimukei kuchigaro chemutengesi, chakakura kupfuura chigaro che driver uye chakaringana mune mukadzi nemwana. Pano pane zano remashiripiti rekufunga, rega ini ndikuratidze, Icho chigaro chakapetwa ikozvino, ngatisimudze chiputi uye chiburitse, chobva chaita mutakura matatu, zvanyatsoita, handiti? Ndiyo nzvimbo huru inopenya yemotokari iyi, mota imwe chete mbiri, kubhadhara mari yemotokari imwe chete, asi kuwana mota mbiri. Hapana munhu anozviramba, handizvo? Canton Fair 2020
Chekupedzisira chikamu chekumiswa kwekumashure, chimiro chacho chiri chitubu chekunyudza, kupawo kutasva kutasva. Iyo yekumberi axle yakagadzirwa yedu pachedu, tinosarudza yepamusoro brand mutengesi wezvipenga, saka mhando inogona kudzorwa mushe.
Ikozvino sumo yemuenzaniso uyu yave kutopera, inotevera inguva yemahara, inguva yako yekutiudza mibvunzo yako uye zvaunoda, ipapo ini nomubatsiri wedu gary tichakupa mhinduro munguva.
Kuisa capaci127th Canton Fair
Zvakanaka munhu wese, zvasvika kumagumo. Turu yemagetsindizvo zvigadzirwa zvedu zvakanyanya, tine ruzivo nehunyanzvi muR & D uye kugadzira, uye takavaendesa kunevanopfuura nyika makumi masere neshanu. Kana iwe uchida zvigadzirwa zvedu, usazeze kutibatanidza isu, tapota tumira ako mafoni pano, mumwe wedu anokubata iwe uye akutumire mamwe ruzivo izvozvi.